Porn နှင့် DSM-5: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားပါသလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
အဆိုပါ Porn Debate
porn နှင့် DSM-5: Play စမှာ Sexual Politics ရှိပါသလား (2012)
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 55 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 30 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ဆောငျးပါး: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း / ဘာစွဲတွင်ချိန်မှဂရုမစိုက်?
စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နောက်ဆုံးရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5) ကျောက်ကိုသတ်မှတ်ခံရဖို့အကြောင်းပါ။ တတိယနှင့် မှတ်ချက်များ၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင်ကုန်ဆုံးသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကိုလူတိုင်းကြည့်ရှုရန်တာဝန်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်သူတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လူနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသရာတွင် DSM ၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုရွှင်လန်းစွာလျစ်လျူရှုထားသော်လည်းဂျာနယ်လစ်များ နှင့်အာမခံကုမ္ပဏီများသည် ဒါဟာစိတ်ရောဂါကုသမှုရဲ့သမ္မာကျမ်းစာကိုစဉ်းစားပါ။
ထူးထူးဆန်းဆန်းသည် DSM-5 ယခုအခါအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကို“ စွဲလမ်းမှုအပိုင်း (၃)” ဟုအမည်ပြောင်းထားသည့်နောက်ဆက်တွဲသို့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖြေရှင်းသည့်ရောဂါနှစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ နှစ်ခုရောဂါများဖြစ်ကြသည် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder နှင့် Hypersexual Disorder (ဘာနှင့်ညစ်ညမ်းပိုလျှံ) ။ ဒီအပြောင်းအရွေ့သည်ဤအဖြစ်ဝေး DSM ၏ဆရာဝန်များကသက်ဆိုင်ရာနေကြသည်အဖြစ်တရားဝင်အခြေအနေများမဟုတ်ဆိုလိုသည်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်မှန်ကန်စွာဖတ်ရသည်။ Highspeed အင်တာနက်ကိုအစဉ်အဆက်လူ့ဦးနှောက်ကို Battery ကိုမှအရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း၏အတိတ်စုံတွဲအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲယဉ်း-သိပ္ပံလေ့လာမှုများများစွာအင်တာနက်စွဲနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ဖေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲလမ်း။ သို့သျောလညျးစွဲရောဂါဖော်ထုတ်အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများလမ်းညွှန်များအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုနက်ရှိုင်းခြောက်ဖို့ DSM အပေါငျးတို့သသက်ဆိုင်ရာ bits သည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပါပွီ။
Confusingly, နှစ်ခုမမှန်အတူတူ workgroup ၏ကြည့်ရှုမှုအောက်သို့မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်အတူတူပင်အခနျးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး၏ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းအတန်ငယ်အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ကြသည်။ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder ဂရုတစိုက်အင်တာနက်ကိုယ်တိုင်က confining, ၎င်း၏အမည်ကိုတခွားစီဖွစျသညျ ဂိမ်းကစားခြင်း အစားမတိုင်မီကနှငျဒဏျမှစတာတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ, လူမှုရေးမီဒီယာစွဲ, လွှမ်းခြုံထက်ကမျြးအခနျးကွီး၌ရှိ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ. Hypersexual Disorderဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစာရင်းပြုစုထားသည့်“ စွဲလမ်းခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကိုလုံးဝဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများမတည်ရှိနိုင်ဟူသောထင်မြင်ချက်ဖြင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်သူ၊ ဒါဟာယခင်၌ရှိ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် အခနျးကွီး။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် DSM ၏စွဲလမ်းမှုအဖွဲ့သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြနေ သ၍ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုစဉ်းစားရန် (ဆိုင်းငံ့ရန်) ဆန္ဒရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူမဟုတ်ပါဘူး သုတေသနလေ့လာမှုများ illuminating များစွာ လက်စွဲသင့်လျော်အတွက်ကြောင့် defining? အဘယ်ကြောင့်အခြားအင်တာနက်စွဲလမ်း (Facebook က, compulsive browsing အတွက်) နဲ့ရှေးရှေးတစ်ဦးတိုးပွားလာနေသော်လည်းထွက်ကျန်ကြွင်း အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖေါ်ပြခြင်း?
ထိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည့်အခါအဘယ်ကြောင့်လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများမမှန်မှုများအလုပ်အဖွဲ့သည်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောဝေါဟာရကိုရှောင်လွှဲနေခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်ပွားနေသောမသန်စွမ်းမှုများကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောအလုပ်ခွင်အုပ်စုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုသက်သေပြရန်တောင်းဆိုနေသလား။ အ DSM-5 ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် အခနျးတှငျ?
အဘယ်အရာကိုအစားဒီအယူအဆကိုကော? အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုမှဆက်စပ်အရာအားလုံးကို (ဂိမ်းကစားခြင်း, ဘာ, လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ညစ်ညမ်း) Move ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ နှင့်စွဲအခြေခံကျကျတဦးတည်းအခွအေနေကြောင်းသိနားလည်သူကိုစွဲလမ်းအထူးကုတစ်ဦး workgroup ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ထားပါ။ မှတကယ်တော့, ဖြစ်ကောင်းအချို့သောဆေးသမား စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society တာဝန်နှင့်အတူကူညီနိုင်ဘူး။
ယခုပင်လျှင်, လောင်းကစားစွဲမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ။ အကောင်းဆုံးကတော့, အားလုံးအမူအကျင့်စွဲလမ်းသည်ဤအခန်းကိုပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အညီရောဂါရလိမ့်မည်။ အလွန်အနည်းဆုံးသို့သော်အားလုံးအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်း, စုစည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း, ပုဒ်မ III ၏ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးခြင်းမှကယ်ဆယ်ရပါမည်။
ပထမတစ်ချက်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဘာစှဲမှာလိင်စှဲနဲ့တူပုံပေါ်နိုင်ပေမဲ့, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အထက်ဖြစ်ကြ၏, အင်တာနက်ကို အများဆုံးခံစားနေရသူအဘို့အစှဲ။ သူတို့အထဲကပေါ်ထွန်း စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲဦးဆောင် overconsumption မောင်းရသော highspeed အငျတာနကျ၏ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်ကရရှိ။ အင်တာနက်ကိုစွဲဂိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်, chat, သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအဓိကအားဝတ္ထုဖို့ဖြစ်ပါတယ်, browse, ဒါမှမဟုတ်ပိုလျှံမှရှုမြင် pixels, အထွတ်အထိပ်နှင့်အားဖြည့်လျှင်ပင်။
အတိတ်ဆိုလမ်းညွှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, နောက်လာမည့် 15-20 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူကုန်းနှီးတင်ပါလိမ့်မည် DSM-5နှင့်သတင်းထောက်များနှင့်အာမခံကုမ္ပဏီများအဆင်ကန်းတောတိုးပေါ်မှာမှီခိုအတူ။ အခုက, DSM-5အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိခြင်းသည်ပညာရေး၊ စောင့်ရှောက်သူများ၊ အသုံးပြုသူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအတွက်အဓိကမျက်မမြင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခိုင်လုံသောလမ်းညွှန်မှုမရှိပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာသောကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ပါ။ များစွာသောသူတို့သည်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ကိုမသိကြပါ သူတို့ရပ်တန့်ပြီးနောက်သည်အထိ.
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို စွဲလမ်းပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်ထက်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အသိအမှတ်ပြုမှုကို DSM-5 အားလုံးပိုအရေးကြီးသည်။ ယနေ့ငယ်ရွယ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်နောက် DSM သည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြwနာများကိုနောက်ဆုံးတွင်ဖြေရှင်းသည့်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း။ မရပါ။ အချို့သူများအတွက်အခြေအနေမှာဆိုးရွားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပဲယောက်ျားလေးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ (၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ) ဤအရာအားလုံးသည်ကျွမ်းကျင်သူများမှသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
မီဒီယာအတွက် porn-သွေးဆောင် ED: PIED အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများက
အဓိကအချက် - DSM အသစ်တစ်ခုထုတ်ရန်တာဝန်မရှိပါ မပါဘဲ အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုကိုအဘို့အအဖြေရှာတဲ့စံအဆိုပြုထား။ လေ့လာရေးပြီးသား 3% ကနေ (တက္ကသိုလ်ယောက်ျား၌) 25% သကဲ့သို့မြင့်မားသောအထိအင်တာနက်စွဲ၏နှုန်းထားများရှာပါ။
Hypersexual Disorder အဆိုပါလိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders workgroup အတွက် sexologists များ၏တီထွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Sexologists ကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပါဝငျနိုငျသောကွောငျ့ဖြစ်ကောင်း porn အသုံးပြုမှုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကယူဆ, သေးအများအပြား sexologists လည်းခိုင်မြဲစွာယုံကြည်ကြသည်နေကြတယ် “ လိင်စွဲလမ်းမှု” မရှိပါ- ကြိုတင်စိတ်ရောဂါရှိသူများ မှလွဲ၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများ၏အလေ့အထများ (ဥပမာ - အစောပိုင်းခေတ်များကကြည့်ရှုခြင်း) သည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်အတိတ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လုံးဝမတူကြောင်းသူတို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းလည်းမရှိပါ။
ရလဒ်, လက်ရှိအဖြစ် DSM-5 စွဲ။ ခင်ဗျားဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုသာပြုသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင့်ကိုစွဲကိုင်ထားသည့်လိင်ပညာရှင်တစ် ဦး အားသင်ရည်ညွှန်းသည် DSM-5။ သင်ဟာ Hobson ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ သင်၌“ ပြproblemနာမရှိ” ဘူး၊ သင်မရောက်မချင်းသင့် ဦး နှောက်ရဲ့ overtaxed limbic system ၏တိုက်တွန်းချက်ကိုလိုက်နာသင့်သည်။ ရှိ တစ်ဦးရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်သင်စိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အကြံပေးခြင်းလိုအပ်ရာများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ, ရှိသည်။ အင်တာနက်စွဲ: ဖြစ်စေလမ်း, သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလှူသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်ဆင်းရဲခံရသောဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ သင်တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းစွဲရှိခဲ့လျှင်မတူဘဲ, သင်တစ်ခုအောက်တွင်စှဲလမျးသူအဖြစ်ရောဂါမည်ဖြစ်ကြောင်း DSM-5 နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
စကားမစပ်, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျားအထောက်အထား Disorders workgroup ၏အဓိကတာဝန်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များကုသမှုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ် pedophilia နှင့်ရောင်စုံ fetishes အမျိုးမျိုး, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်လေးတွေထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ အဘယ်အရာကိုကျား, မကြ။ ယင်းအပေါ်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဆရာဝန်များမှာတစ်ဦးကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့် လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders workgroup ဒီတော့ထွက်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအမျိုးသမီးအော်ဂဇင်, တယောက်ကိစ္စရပ်များနှင့်များ၏လေ့လာမှုမှာအထင်ကြီးစရာအတိမ်အနက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသပေမယ့်မဟုတ်တဦးတည်းဆရာဝန်စွဲ၏ neuroscience အတွက်ခိုင်မာတဲ့နောက်ခံရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားဆရာဝန်များကစိတ်ရောဂါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော် စွဲကသူတို့ရေဒါပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ပင်မျက်စိကန်းအစက်အပြောက်ကအနည်းဆုံး 20 နှစ်ပေါင်း-သည့်အခါကျောစတငျရထားတဲ့ အမှားဆေးပညာ၏လယ်ပြင်တွင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးစွဲဆေးပညာ၏အထူးအတည်ပြုသောအခါ, မတရားဖမ်းဆီးဖြစ်နိုင်သောစှဲများ၏စာရင်းထဲကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထွင်းထု။
လိင်ကထည့်သွင်းခဲ့ကြသင့်ကြောင်းအထောက်အထားများနှင့်ကနျြသိပ္ပံနည်းကျမျှတမှုတစ်ခုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း, နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ (အတူတူ circuitry ဦးနှောက်၏လိင်နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးအုပ်ချုပ်။ အမူအကျင့်များနှင့်ဓာတုအားလုံးစှဲ, ဒီ circuitry dysregulateလိင်အပါအဝင် -so နီးပါးတစ်ဦးမျှမ-brainer ခဲ့သည်။ )
သို့သော်ထိုအချိန်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသည်လူသားတို့၏အနာဂတ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောလိင်စွဲလမ်းသူများသည်နည်းပါးသောကြောင့်အပေးအယူသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ Alas, တစ် ဦး စွဲ - သိပ္ပံရှုထောင့်ကနေ, ဒီအပေးအယူအမှားခဲ့ကြောင်းပို။ ပို။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူအမှားအယွင်းပြန်ပေါ်လာသည် တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုမျိုးဆက်ကိုက်…ခက်ပါတယ်
အခုငါတို့မဖြေရှင်းနိုင်သောအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရသည် DSM-5လိင်မှုဗေဒပညာရှင်များသည်ဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမမှန်စစ်ဆေးခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သမိုင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများရှိသည်ဟူသောခံယူချက်အားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပုံရသည် မပေးနိုင် (လူနာတွင်ရှိပြီးသားစိတ်ရောဂါမရှိပါက) စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာသည်။ သူတို့၏စိတ်ရောဂါပါရာဒိုင်းသည်ပန်းချီဆရာများနှင့်ပြပွဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်သော်လည်း၊ ယနေ့အင်တာနက်စွဲလမ်းနေသောလူငယ်များအတွက်ယင်းသည်ယူဆစရာအကြောင်းမရှိပါ။
လုပ်ငန်းခွင်အုပ်စုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုတည်ရှိမှုကိုသက်သေပြရန်အကန့်အသတ်ရှိသလား။ voyeur (ရောဂါတစ်ခု) ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားကဘာလဲ in အဆိုပါလက်စွဲစာအုပ်)? အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်ငြားအခြားသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုကျူးကျော် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မစွမ်းနိုင်ပါသလော။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များရှိသော်လည်းရပ်တန့ ်၍ မရနိုင်သည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာသော ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများကဘာကြောင့်ဤသို့ရှင်းပြသနည်း။ သူ၏အခြေအနေကိုနောက်ထပ်သုတေသနအပိုင်းသို့ပို့လိုက်သည်။
စီးကရက်စွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဆေးရွက်ကြီး-ကုမ္ပဏီသိပ္ပံပညာရှင်များတောင်းဆိုနေတာကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့အင်တာနက်ကို erotica ၏အလားအလာအန္တရာယ်ရှိသောဆိုးကျိုးများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် sexologists တောင်းဆိုနေတာသလဲ?
လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများမမှန်မှုပြသခြင်းအလုပ်အဖွဲ့သည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအရသိသာထင်ရှားမှုမရှိခြင်းသည်အများအားဖြင့်ဆီလျှော်မှုမရှိဟုယူဆနေသည်။ "ဘာကြောင့်ကြံ့တွေကိုလေ့လာရတာလဲ" မိမိအအာရုံကိုညွှန်ကြားသောအခါတစ် ဦး ပညာရေးဆိုင်ရာ sexologist မေးတယ် ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများ နှင့် စွဲလမ်း၏တွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုင်းဘုတ်များ ဒီနေ့အင်တာနက်စွဲလမ်းနေတဲ့လူငယ်များကသတင်းပို့နေကြတယ်
Workgroup အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမာတင်ပီ Kafka, MD ကသူ့ကျယ်ပြန့် 2009 ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်စွဲမှ neuroscience ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဆက်စပ်မှုတစ်ခုစာမျက်နှာထက်လျော့နည်းခုထဲက Hypersexual Disorder: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုချက် Diagnosis. Kafka ၏ကာကွယ်မှုတွင်လူ့ဆန်းစစ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုနှစ်ရပ်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိသောတိုက်နယ်၏အခန်းကဏ္luကိုဖော်ထုတ်သည့်သုတေသနအသစ်များသည်သူ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများအပေါ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဝမ်းသာစရာက DSM-5 ဟာဒီအရေးကြီးတဲ့သုတေသနကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့တစ်နှစ်ကျန်သေးတယ်။
အဆိုပါ workgroup ၏လက်ရှိစွဲအသိပညာအဆင့်က "hypersexual" ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့နှင့်ပတ်သက်။ ကောက်ယူသည့်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံ၌ထငျရှားပါသညျ။
လိင်မှုအထွating်အထိပ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အပြုအမူသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည့်မည်သည့်အကြံပြုချက်ကိုမဆိုတရားမ ၀ င်စိစစ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း၏လိင်အလေ့အထများကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြစ်စေမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောက်ရွံ့မှုသည်နေရာလွဲနေလိမ့်မည်။ "စှဲလမျးသူ" ဆိုတဲ့တံဆိပ်ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ကွက်တယ်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး or တစ်ဦးစိတ်ရောဂါ။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူမရှိတော့တချို့ bothersome ပလပ်စတစ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို reverse နိုင်ရန်အတွက်လိုလားသည်သူ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲအကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ဤရွေ့ကား ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်ယနေ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူလူငယ်များလိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည် ဆိုတာတွေ့ရဖို့သင်ယူ သူတို့က Full- လွစွဲသို့မှိုမတိုင်မီရှည်လျားသော။ အကယ်၍ ဤဆိုင်းဘုတ်များသည်လူသိများသောအသိပညာဖြစ်ပါက၊ ငယ်ရွယ်သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများစွာသည်ကုသမှုမလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်မဟုတျပါဘူး DSM-5 ဒီအရေးကြီးတဲ့ပညာရေးအားထုတ်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်? အင်တာနက်စွဲလမ်းသူများအားအမူအကျင့်ပြောင်းလဲစေရန်မည်သို့ကူညီရမည်ဆိုသည်ကို၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်မဖော်ပြသနည်း သူတို့ကိုဒုက္ခခံစားခဲ့ရ နှင့်ဆိုးရွားစွာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေ?
DSM-5 သည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန်ပြဌာန်းထားသောနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအမှတ်မထင်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်နိုင်သလား။ ဆက်ဆက်“ ထပ်မံလေ့လာရန်” အတွက်“ hypersexuality” ကိုဆက်လက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, hypersexuality မကြာခဏရောဂါဗေဒမဖြစ်, စွဲအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ဘာဆက်စ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလက်စွဲစာအုပ်မှနောက်ဆက်တွဲ (အခန်း ၃) သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကိစ္စရပ်တစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုအားအရှိန်အဟုန်မြင့်မားသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု - အာရုံစူးစိုက်မှု။
ဤရွေ့ကားပြောင်းရွှေ့ရန်အထူးခက်ခဲသည် (စွဲလမ်းမှုမှ "လိင်" ကိုထွင်းထုထားသည့်သမိုင်းဆိုင်ရာအမှားအားယခုဆရာဝန်ဆရာဝန် ၃၀၀၀ မှပြန်လည်တည့်မတ်ပေးသောကြောင့်) စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) ။ 2011 ခုနှစ်, ASAM စွဲနေတဲ့ကြေငြာ မူလတန်း နာမကျန်းမှု (ယခင်ရှိပြီးသားစိတ်ရောဂါမလိုအပ်ပါ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုများသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း၏လူထုထုတ်ပြန်ချက်သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာရှည်အာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်။
DSM ၏လိင်နှင့်ကျားမခွဲခြားမှုမသန်စွမ်းမှုများအလုပ်အဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်များသည် ASAM ၏စွဲအထူးကုများကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် AMA ၏တရားဝင်အသံဖြစ်သည် DSM-5) လက်ရှိစွဲသိပ္ပံရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူး။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုပင်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုများသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ကိုဖယ်ရှားပါနှင့်အပြုအမူသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်ဆင်တူသည်။
စွဲလမ်းအများဆုံး diagnosable မမှန်တစ်ခုဖြစ်သည်
လိုအပ်ချက်များ-ပိုပြီး-လေ့လာမှုထောင်ထဲ (ပုဒ်မ III ကို) အင်တာနက်စွဲလမ်းသူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်ဖွင့်သော့ခတ်၏အန္တိမအမြီးအမောက်, အကြောင်း မူရင်း DSM ၏ရည်ရွယ်ချက် စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်တသမတ်တည်း၊ ပုံတူကူးယူနိုင်သော၊ သိပ္ပံနည်းကျခိုင်လုံသောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆေးပညာသမိုင်းတွင်အများအားဖြင့်သိပ္ပံပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည် မည်သည့် ဆငျးရဲခံအဖြစ်ကောင်းစွာစွဲအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီ။ ရောဂါရှာဖွေယုံကြည်စိတ်ချရသည့်ဖြစ်သကဲ့သို့ DSM-5အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအားလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုကြိုဆိုသင့်သည် ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ သိပ္ပံပညာ၏ကိစ္စအဖြစ်။
ဤအရာကိုသင်ယခုဖတ်ပြီးပါကမကြာသေးမီကစွဲနေသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသင်သဘောပေါက်ကောင်းနားလည်လိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကသုတေသီများသည်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကိုအလိုအလျောက်စွဲလမ်းစေပြီးသူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသားများကိုကောင်းစွာနားလည်ထားပြီးအချို့မှာလူသားများတွင်တွေ့နိုင်ပြီးတိုင်းတာနိုင်သည်။
ယင်းနောက်သုတေသီများသွေးဆောင် အမူအကျင့် တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲ, ဘီး -running နှင့်အစားအစာစွဲ။ (ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကြွက်များကို Pixel အတွက်ပြုလုပ်ရန်သွေးဆောင်။ မရပါ။ သို့သော်လိင်နှင့်စွဲလမ်းမှုအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုနားလည်ရန်ကြွက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ )
မကြာသေးမီကသုတေသီများ (ထိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာသင်ယူအစားအသောက်စွဲလမ်း, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုကဂိမ်းကစားခြင်း နှင့် အင်တာနက်စွဲ) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုအပေါငျးတို့သပါဝင်ပတ်သက်နေ တူညီတဲ့အခြေခံယန္တရားနှင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြ shared ပွောငျးလဲ၏စုဆောင်းခြင်း ဦး နှောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒ၌တည်၏။ (စွဲလမ်းစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ယန္တရားများကိုကြီးထွားစေခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ကိုသတိရပါ ပြီးပြီ ထိုကဲ့သို့သောလိင်စိတ်နိုးထအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်အဘို့အရာဌာန၌။ )
ဤစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောအပြောင်းအလဲများစွာကိုအစပျိုးပေးသော master switch သည်ပရိုတိန်းဖြစ်သည် DeltaFosB။ ဆက်လက် - စားသုံးမှုဆက်လက် သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ, အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်း) သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုနီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး DeltaFosB အကျိုးကို circuitry များတွင်စုပြုံမှကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တကယ်တော့အထက်ပါမှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားအဖြစ်, သုတေသီများကြောင်းပြသကြ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ကြွက်များ၏“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
အဘယျသို့သောအခြား DSM ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မျိုးပွား, ဒါမှမဟုတ်အမူအကျင့်စွဲသကဲ့သို့အများကြီးယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူရောဂါနိုင်ပါသည်? လိင်နှင့်ကျားမရေးရာလက္ခဏာများမမှန်မှုများအလုပ်အဖွဲ့သည် ဆက်လက်၍ DSM-5 တွင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သော fetish ချို့တဲ့မှုများစွာသည် frotteurism, sadomasochism, Exhibitionism၊ အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်သူတို့၏အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံနည်းကျရှိပြီး၊ ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များ.
လက်ရှိ DSM-5 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနာမကျန်းဖြစ်ဘဲအကူအညီလိုအပ်နေသောအင်တာနက်စွဲလမ်းသူလူငယ်များအားပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည်။ အဆိုပါသိပ္ပံအမူအကျင့်စွဲမူလတန်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်တ ဦး တည်းအခွအေနေဖြစ်ကြောင်းအစိုင်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းကစားစွဲသည် DSM-5 တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်စွဲလည်းအဲဒီမှာပိုင်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်စောင့်ဆိုင်းစရာအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
consigning အားဖြင့် Hypersexual Disorder နှင့် အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးလက်ရှိရန် DSM-5 သည်:
porn အသုံးပြုမှုကိုပတ်ဝိုင်းထားတဲ့အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါအပေါ်မျိုးစုံဦးနှောက်လေ့လာမှုများ, လျစ်လျူရှု။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများနှင့်သူတို့၏စောင့်ရှောက်သူများကစွဲလမ်းစေသည့်လက္ခဏာများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ - စိတ်ရောဂါ) မှလွဲ၍ အခြားအမည်မသိသောယန္တရားများမှပေါ်ထွက်လာရမည်ဟူသောစိတ်ကူးယဉ်ကိုအားပေးခြင်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထူးကု (ASAM) ၏စွဲ-သုတေသနခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖယ်ရှား။
အင်တာနက်ကို erotica ပေးပို့ကြောင့်အသုံးပြုသည်လမ်းအသုံးအနှုန်းများအတွက်အတိတ်၏ erotica မတူပဲကြောင်းဝန်ခံရန်ငြင်းဆန်။
သငျသညျခဏရှိပါကအားလုံးကိုအင်တာနက်ကိုစှဲထားပါရန် DSM-5 အားပေးကျေးဇူးပြုပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲခြင်းရောဂါ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါ DSM စွဲညာ, ဇွန်လ 6, 2012 လာ
DSM သည်စွဲလမ်းမှုရရှိသည် - NY Times
Howard MARKEL အားဖြင့်
အမ်း Arbore, Mich ။
ကျနော်တို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုကဲ့သို့သောအပြုအမူဖို့ "စွဲ" ကြောင်းပြောပါတဲ့အခါ လောင်းကစားဝိုင်း သို့မဟုတ်အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း, ထိုအဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲတူသောမှီခိုဖို့တကယ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ထိုကဲ့သို့သော compulsive Are - ဒါမှမဟုတ်ပဲလျော့ရဲရဲနဲ့ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်သနည်း
ထို Diagnostic ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်ရေးသားကော်မတီ, စိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက်စံရည်ညွှန်းအလုပ်၏ updated အဓိပ္ပာယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်ဤမေးခွန်းကိုမကြာသေးမီကသညျထ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု နှင့်အသစ်အမျိုးအစားအပါအဝင်စွဲ, "အပြုအမူစှဲ။ " ဟုအဆိုပါအခိုက်မှာအခုအသစ်ကဏ္ဍ featured တစ်ခုတည်းသောရောဂါရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အကြံပြုချက်သည်အခြားအပြုအမူမမှန်မှုကြောင့်သင်တန်းကဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်စွဲဥပမာ, စပိုင်းတွင်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်သုတေသနဆိုင်းငံ့ (လိင်စွဲလမ်းခဲ့ကဲ့သို့) တစ်ခုနောက်ဆက်တွဲဒုတိယတန်းသို့တန်းဆင်းခဲ့ရခဲ့သည်။
သံသယများလည်းစွဲများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်စံ overdiagnosis နှင့် overtreatment မှသာမန် (မကောင်းတဲ့လျှင်) အပြုအမူနှင့်ခဲ pathologize လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ Allen ကဂျေပြင်သစ်, တစ်ဦးပါမောက္ခ Psychiatry နှင့် DSM အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ Duke University ကအမူအကျင့်သိပ္ပံ, သစ်ကိုအဓိပ္ပာယ် "နေ့စဉ်အပြုအမူများ Medical" ကိုပမာဏနှင့်ဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် "မှားယွင်းသောရောဂါ။ " ကျန်းမာရေးအာမခံ ကုမ္ပဏီများအစွဲ diagnoses များပြားအဖြစ်သစ်ကိုအဖြေရှာတဲ့စံနှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အရာပေါင်းများစွာကုန်ကျခြင်းအလိုငှါစားတတ်သောနေကြသည်။
ရောဂါရှာဖွေစံတိုးချဲ့အခါအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်အလားအလာအမြဲရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် key ကိုသိပ္ပံနည်းကျအချက်ရက်နေ့တွင်, DSM ရဲ့ဝေဖန်သူများကမှားဖြစ်ကြသည်။ စွဲလမ်း၏ရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူမည်သူမဆိုကိုသင်ပြောပြနိုင်သကဲ့သို့, DSM ရဲ့အပြောင်းအလဲများကိုတိကျစွာကြောင့်တစ်ဦးစှဲလမျးသူဖြစ်ရမည်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေသောနားလည်မှုရောင်ပြန်ဟပ်။
စွဲလမ်းမှု၏အယူအဆပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရာစုနှစ်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အစပိုင်းမှာကြောင့်ပင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအယူအဆမဟုတ်ပါ။ ရှေးခေတ်ရောမမှာတော့ "စွဲ" ဟုဥပဒေရေးရာမှီခိုရည်ညွှန်း: ငွေချေးဆိုးသွမ်းကိုက်အပေါ်သို့ချမှတ်ကြောင်းကျွန်စနစ်၏နှောင်ကြိုး။ ကောင်းစွာ 1800s သို့ဒုတိယရာစုအေဒီကနေ "စွဲ" အလွန်အကျွံစာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဝါသနာဖို့ slavish ဆည်းကပ်ကဲ့သို့ obsessive အပြုအမူတွေကိုမဆိုအရေအတွက်ကိုဆီသို့တစ်ဦးသဘောထားဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါဝေါဟာရကိုမကြာခဏဇာတ်ကောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်ကျင့်တရားမြော်တစ်ဦးအားနည်းချက်ဆိုလို။
"စွဲ" ကို Over-ဆေးညွှန်းဆေးသမားများကဘိန်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်၏ရလဒ်အဖြစ်သာနှောင်းပိုင်း 19th ရာစုအတွင်းဆေးဝါးကုသမှုလုပ်သည်။ ဒီနေရာမှာစွဲများ၏ concept ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားကာ exogenous ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အယူအဆတို့ပါဝင်သည်သို့ရောက်ကြ၏။ အစောပိုင်း 20th ရာစုအတွင်းစတင်ကာစွဲဖော်ထုတ်အတွက်အခြားအဓိကဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြတ်အပေါ်သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
စွဲလမ်း၏ဤအဓိပ်ပါယျအမြဲဂရုတစိုက်မသုံးဖြစ်ခဲ့ပါ (ကအရက်သေစာအဘို့အနှစ်ကို ယူ. နီကိုတင်း ) သူတို့၏ဥပဒေကြမ်းသငျ့ရှိနေသော်လည်းစွဲလမ်းအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့, မကတိကျမှန်ကန်ဖြစ်ထွက်လှည့်ခဲ့ပေ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဆေးခြောက်: ငါဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရသည့်အခါဆေးလိပ်သောက်ခဲရပ်တန့်အပေါ်သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးကြောင့် 1980s အတွက်, ဆေးခြောက်စွဲလမ်းဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဆေးခြောက်မှုအတွက်ဆိုးဆိုးရွားရွားစွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်သင်သိရပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာဆက်ဆက်နိုင်သော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆီဆဲလ်များမှမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရှင်းလင်းရေး, ရက်သတ္တပတ် (အစားနာရီသို့မဟုတ်ရက်) ကြာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာခဲဖြစ်ပေါ်လို့ပဲ။
ထို့ကြောင့်အများဆုံးဆရာဝန်များကစွဲလမ်း၏အဓိပ္ပါယ်အပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံခဲ့ကြပြီ, ဒါပေမယ့်အများကြီးနေဆဲလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်တစ်ခု exogenous ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုလောင်ပါတဲ့သူမှသာသူများကလူစွဲဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ အတိတ်ကာလအတော်ကြာဆယ်စုနှစ်ကျော်, သို့သော်, သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုလန်းလာသောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု exogenous ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာဦးနှောက်အတွက်အစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ရောဂါဖြစ်စဉ်ကိုထက်စွဲဖို့လျော့နည်းအရေးကြီးသောကြောင်းညွှန်ပြထားပြီး - ဦးနှောက်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ disrupts တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို, ဓာတုစာတိုပေးပို့ရေးစနစ်က နှင့်အကြံအစည်များနှင့်လုပ်ရပ်များအုပ်ချုပ်ခွင့်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်အခြားယန္တရားများ။
ဥပမာအားဖြင့်, အစောပိုင်း 1990s ကတည်းကမစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှာ neuropsychologists Kent C. Berridge နှင့်တယ်ရီအီးရော်ဘင်ဆင်ဟာ neurotransmitter လေ့လာခဲ့ကြပါပြီ dopamine, တဏှာ၏ခံစားခကျြမြင့်တက်ပေးသော။ သူတို့ကသငျသညျထပ်တလဲလဲကိုကင်းကဲ့သို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူသည့်အခါ, သင့် dopamine စနစ်စွဲကဦးနှောက်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့အတှကျမူးယစ်ဆေးအလွန်ခက်ခဲအောင်, Hyper-တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးပြီးတွေကိုနှင့်အမှတ်တရများပင်နှစ်ပေါင်းကြားနေကြသူစွဲအတွက်မတရားသောထုတ်ယူနိုင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်: မူးယစ်ဆေးကိုယ်တိုင်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသော်လည်းဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုစှဲလမျးသူဆုတ်ခွာမှတဆင့်ဝင်ရှည်လျားပြီးနောက်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။
ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုမှာနိုရာ Volkow ကဦးဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုအသုံးပြုကြပါပြီကင်းစွဲမျှသာကင်းသုံးပြီးလူများ၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုလျှင်ပင်, dopamine အဆင့်ဆင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုတိုးပွါးကြောင်းပြသရန်ဖတ် အလေ့အထနဲ့သင်ယူမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်။ ဒေါက်တာ Volkow ရဲ့အုပ်စုတစ်စုနှင့်အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များပေ Scan ဖတ်အသုံးပြုအလုပ်လုပ်တဲ့ပါပြီ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် သိသိသာသာအဝလွန်နေသောမူးယစ်ဆေးစွဲ, compulsive လောင်းကစားသမားတွေနှင့် overeaters ၏ဦးနှောက်အတွက်အလားတူ dopamine အဲဒီ receptor derangements သရုပ်ပြရန်။
လိင်, စား, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကို - - ပဲမဆိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကို: ဒီနေရာမှာဆွဲရန်နိဂုံးကိုကင်းနဲ့တူတ္ထုများစွဲလမ်းအပြုအမူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောဦးနှောက်ထဲမှာထွက်လာပါတယ်အပြောင်းအလဲများမှာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြပြီးတိုကျတှနျးထားသော်လည်း, ထိုသူတို့သာဖြစ်နိုင်သောအစပျိုးခြင်းမဟုတ်ကြောင်း စွဲလမ်းစေနှင့်အဖျက်ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိပါတယ်။
ရောဂါအဓိပ္ပာယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အသစ်သောသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား၏အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲပစ်။ ဒီအစွဲနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့တယျ။ ကျနော်တို့သစ်ကို DSM စံဘက်လျက်နှင့်ထိရောက်သောကုထုံးနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူစွဲလာအောင်နှိုးဆွသမျှသောဝတ္ထုများနှင့်အပြုအမူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သင့်ပါတယ်။
Howard Markelတစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်မီချီဂန်တက္ကသိုလ်မှဆေးဝါးများ၏သမိုင်းတစ်ဦးပါမောက္ခ၏စာရေးဆရာက "စွဲလမ်းမှုတစ်ခုခန္ဓာဗေဒ: ။ ဇီးဂမွန် Freud ဝီလျံ Halsted, နှင့်အံ့ဖွယ်မူးယစ်ဆေးကင်း"
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ဇီဝကမ္မဗေဒကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း - နောက်ဆုံးတွင် DSM နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးကိုလူနာများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးနေချိန်တွင်နောက်ဆုံး၌ DSM နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံရေးကိုကျော်ဖြတ်စေနိုင်သည်။
သောမတ်စ် Insel, အ NIMH ဒါရိုက်တာမကြာသေးမီက DSM5 နှငျ့ပတျသကျဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်: http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml.
By သောမတ်စ် Insel ဧပြီလ 29, 2013 အပေါ်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာတော့အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှ၎င်း၏ Diagnostic သစ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်လွှတ်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဤ volume ကိုအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်ရာမှစိတ်ဓါတ်များမမှန်ဖို့အများအပြားလက်ရှိအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစား tweaks ပါလိမ့်မယ်။ ဤပြောင်းလဲများစွာကိုအငြင်းပွားစရာဖြစ်ရပြီနေစဉ်, နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် DSM-IV ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအခါ 1990 ကတည်းကသုတေသနကနေပေါ်ထွက်လာသစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီးယခင်ထုတ်ဝေ၏အများစုမှာကျိုးနွံပွောငျးလဲ, ပါဝငျသညျ။ တစ်ခါတစ်ရံဒီသုတေသနအသစ်ကအမျိုးအစား (ဥပမာစိတ်ဓါတ်များ dysregulation ရောဂါ) အကြံပြုသို့မဟုတ် (ဥပမာ Asperger ရဲ့ syndrome ရောဂါ) ယခင်အမျိုးအစားကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။1
အခုအသစ်ကို manual ၏ရည်မှန်းချက်, ရှိသမျှအရင် edition မှာကဲ့သို့ psychopathology ဖော်ပြတစ်ဘုံဘာသာစကားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ DSM ကိုလယ်များအတွက် "ကျမ်းစာ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်နေစဉ်, ကတံဆိပ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ defining အစုတခုဖန်တီးမှာအကောင်းဆုံး, တစ်ဦးအဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ဝေ Clinician တူညီတဲ့နည်းလမ်းတူဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုရေးအတွက်လုံလောက်ခဲ့ပါသည် - DSM ၏ edition မှာတစ်ခုချင်းစီ၏ခွန်အား "ယုံကြည်စိတ်ချရ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်တရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ischemic နှလုံးရောဂါ, lymphoma, ဒါမှမဟုတ် AIDS ရောဂါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဘဲ, အ DSM diagnoses လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြွတ်အကြောင်းသဘောတူမဟုတ်ဘဲမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဓာတ်ခွဲခန်းအတိုင်းအတာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ဆေးပညာ၏ကျန်ခုနှစ်တွင်, ဒီရင်ဘတ်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အဖျားများ၏အရည်အသွေး၏သဘောသဘာဝအပေါ်အခြေခံပြီးရောဂါရှာဖွေစနစ်များကိုဖန်တီးညီမျှပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းလက္ခဏာတွေခဲကုသမှုရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုညွှန်ပြကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီအဖြစ်အမှန်စင်စစ်လက္ခဏာ-based ရောဂါ, ဆေးပညာ၏အခြားဒေသများအတွက်တစ်ချိန်ကဘုံ, အဓိကအားဖြင့်အတိတ်ကာလတဝက်ရာစုအတွင်းအစားထိုးခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါလူနာပိုကောင်းထိုက်။ NIMH အဆိုပါဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက် (RDoC) အသစ်တစ်ခုကိုခွဲခြား system အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. မှမျိုးရိုးဗီဇ, ပုံရိပ်, သိမြင်မှုသိပ္ပံ, နှင့်သတင်းအချက်အလက်၏အခြားအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရောဂါအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့စီမံကိန်းကို။ အတိတ် 18 လအတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုစီးရီးမှတဆင့်ကျနော်တို့ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သစ်တစ်ခု nosology များအတွက်အတော်ကြာအဓိကအမျိုးအစားသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်အများအပြားယူဆချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး:
ဇီဝဗေဒအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကရောဂါရှာဖွေချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်လက္ခဏာတွေလက်ရှိ DSM အမျိုးအစားအားဖြင့်သတ်ခြင်းကိုမပြုရ,
စိတ်ရောဂါသိမှတ်ခံစားမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ၏တိကျသော domains များ ဆက်စပ်. အကြောင်းဦးနှောက်ဆားကစ်ပါဝင်သောဇီဝမမှန် ဖြစ်. ,
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ခုချင်းစီအဆင့် function ကိုတစ်အတိုင်းအတာကိုဖြတ်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်,
ဒါဟာကျနော်တို့ကဒေတာတွေကိုကင်းမဲ့သောကွောငျ့အကြှနျုပျတို့ biomarkers သို့မဟုတ်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးစနစ်တစ်ခုဒီဇိုင်းမနိုင်ကြောင်းချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ဒီသဘောနဲ့, RDoC အသစ်တစ်ခု nosology အတွက်လိုအပ်သောဒေတာများကိုစုဆောင်းများအတွက်မူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအဖြစ် DSM အမျိုးအစားကိုသုံးပါလျှင်အောင်မြင်မနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည် "ရွှေကိုစံ။ "2 အဆိုပါရောဂါရှာဖွေစနစ်ထွန်းသစ်သုတေသနအချက်အလက်ပေါ်မဟုတ်ဘဲလက်ရှိလက္ခဏာ-based အမျိုးအစားပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ရင်ဘတ်နာကျင်မှုနှင့်အတူအများအပြားလူနာ EKG အပြောင်းအလဲများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ EKGs အသုံးမဝင်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုပါစို့။ ဒါကကျွန်တော်တစ်ဦး biomarker ပယ်ချသည့်အခါက DSM အမျိုးအစား detect မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဆယ်စုနှစ်များအတွက်လုပ်နေတာပြီအရာဖြစ်တယ်။ မရင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ - - စပျစ်သီးပြွတ်နှင့်မည်သို့ဤအပြွတ်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုဆက်စပ်ကျနော်တို့ဘယ်လို data အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်မျိုးဗီဇ, ပုံရိပ်, ဖြစ်စဉ်နှင့်သိမြင်ဒေတာစုဆောင်းကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
NIMH ကွာ DSM categories မှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့စနစ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင် - သို့မဟုတ် Sub-သွေးခွဲလက်ရှိအမျိုးအစား - ရှေ့ဆက် Going ကျနော်တို့လက်ရှိအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီးကြည့်ရှုကြောင်းသုတေသနစီမံကိန်းများထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်။ ဒီလျှောက်ထားတွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမဟုတ်ဘဲတင်းကျပ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါစံတွေ့ဆုံရှိသူများထက်စိတ်ဓါတ်များဆေးခန်းအားလုံးကိုလူနာလေ့လာလိမ့်မယ်။ "စိတ်ကျရောဂါ" အတွက် biomarkers ၏လေ့လာရေးကဤရောဂါလက္ခဏာတွေအခြေခံသည့် circuitry နားလည်ရန် anhedonia သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ် psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီနှင့်အတူအများအပြားမမှန်ဖြတ်ပြီးကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလူနာတွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကျနော်တို့အသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကုသမှုမှကျူးလွန်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီတစ်ခုသာပိုမိုတိကျသောရောဂါရှာဖွေသည့်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့ဖွစျမညျခံစားရတယ်။ RDoC ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ပိုကောင်းရလဒ်များရှာသည်။
RDoC သည်သုတေသနမူဘောင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှကြာသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ NIMH သုတေသီများသည်ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုနှင့်သုတေသနရန်ပုံငွေအတွက်အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှုတို့ကြောင့်အလေးထားပြီးသားဖြစ်သော်လည်းဤပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့က RDoC ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုနှင့်ကွာရှင်းထားသောပညာရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်လိမ့်မည်။ သို့သော်လူနာများနှင့်မိသားစုများကဤပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုသင့်သည်။တိကျဆေးဝါး"ကင်ဆာရောဂါနှင့်ကုသမှုအသွင်ပြောင်းသောလှုပ်ရှားမှု။ RDoC ကျွန်တော်စိတ်ရောဂါရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံပါဘယ်လိုအကြောင်းကြားရန်သုတေသနအသစ်တစ်ခုမျိုးဆက်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အသွင်ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ထက်လျော့နည်းအချည်းနှီးဖြစ်၏။ နှစ်ခုထင်ပေါ်ကျော်ကြားစိတ်ရောဂါ geneticists မကြာသေးမီကနိဂုံးချုပ်အဖြစ် "ဟုအဆိုပါ 19th ရာစုအဆုံးမှာသူကကျိုးကြောင်းဆီလျော်၏အခြင်းတရားဝင်မှုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေရှာတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးဖို့ယုတ္တိဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 21st ရာစုအစပိုင်းမှာကျနော်တို့ပိုမိုမြင့်မားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းများကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ "3
အဓိက RDoC သုတေသန domains များ:
အနုတ်လက္ခဏာ valence စနစ်များ
positive valence စနစ်များ
arousal / Modulatory စနစ်များ
1စိတ်ကျန်းမာရေး: အရောင်စဉ်တွင်။ အာဒံကိုဃသဘာဝတရား။ 2013 ဧပြီ 25; 496 (7446): 416-8 ။ Doi: 10.1038 / 496416a ။ မရှိနိုင်ပါစိတ္တဇ။ PMID: 23619674
2အဘယ်ကြောင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအကြောင်းလုပ်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟားဗတ်ဘို့ဤမျှကာလပတ်လုံးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သလဲ Kapur S က, Phillips က AG က, Insel TR ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012 ဒီဇင်ဘာ; 17 (12): 1174-9 ။ Doi: 10.1038 / mp.2012.105 ။ EPub 2012 သြဂုတ် 7.PMID: 22869033
3အဆိုပါ Kraepelinian dichotomy - သွား, သွား ... ဒါပေမယ့်မသွားရသေး။ Craddock N ကို, Owen MJ ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ; 196 (2): 92-5 ။ Doi: 10.1192 / bjp.bp.109.073429 ။ PMID: 20118450
porn စွဲမကြာမီလက်စွဲစာအုပ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့် DSM ကော်မတီဝင်ရှင်းပြ